Saraakiil Shabaab oo lagu dilay duleedka Magaalada Baydhabo (SAWIRRO) | Dhacdo
Saraakiil Shabaab oo lagu dilay duleedka Magaalada Baydhabo (SAWIRRO)
Taliyaha Ciidanka Booliska Koonfur Galbeed, Korneyl Cabdi Ibraahim Shaamow (Cabdi Dheere) ayaa sheegay in ay ka hortaggeen go’doomin uu cadowgu damacsanaa inuu geliyo Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Taliyaha ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka oo kaashanaya kuwa Koonfur Galbeed ay Talaadadii hawlgal ka fuliyeen deegaanka Saydheelow, oo hoos-tagga Magaalada Baydhabo, xilli ay isu uruursanayeen maleeshiyada Al Shabaab.
“Iyadoo duleedka Degmada Baydhabo ay isku uruursanayeen kooxaha nabadiidka, iyagoo damacooda ahaa inay dhibaateeyaan shacabka Muslimiinta ah Soomaaliyeed ee xamaalanaya, magaaladana u soo adeeg doonta laga war helay inay halkaasi isku uruursanayaan, oo markaasi raba inay magaalada cunaqabateen ku bilaabaan ayaa waxaa halkaasi ka dhacay dagaal.” Ayuu yiri Taliyaha oo Warbaahinta la hadlay.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaa halkaasi lagu dilay toddobo xubnood oo masuuliyiin ay ku jiraan, sida Gudoomiye-yaashii dhaqaalaha ugu qaabilsanaa deegaanada Saydheelow iyo Labaatan Jirow iyo nin ay ku sheegeen Taliye inuu yahay. Saddexdaas xubnood ee masuuliyiinta ah waala dilay.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaa kaloo gacanta lagu soo dhigay illaa shan qori oo AK47 ah, wixii kalena way kala firdhadeen, wixii maxaabiis ahna waan heynaa oo nolol lagu soo qabtay, waana soo bandhigi doonnaa, Insha’Allah.”
Korneyl Cabdi Ibraahim Shaamow, Taliyaha Ciidanka Booliska Koonfur Galbeed ayaa dhalinyarada la marin habaabiyay ee ka tirsan Shabaabka ugu baaqay in ay ka waan-towbaan dhibaatada la rabo inay dadkoodu geliyaan.
“Dhalinyarada Soomaaliyeed ee la marin habaabiyay ee kooxaha nabadiidka ah oo dadkooda ay ku dhibi rabaan ha iska dhaafaan, haka waan-towbaan. Hawlgalkan wuu bilowday, waxaana farayaa inay dadkooda u soo noqdaan, iskana daayaan inay ummadooda dhibaateeyaan.” Ayuu yiri Taliyaha.
Taliye Cabdi Dheere ayaa intaa ku daray “Dadka ay cunaqabateenayaan waa hooyooyinkooda, iska dhaafa qof dan leeyahay oo dalalkooda dembiyo ka soo galay oo la raadinayo ee dadkaada dhibaatey ku dhahaya, haka yeelin, ka waan-tow, hadda rajaa leedahay waa lagu soo dhaweynaa ee soo noqo, ciidankaaga iyo dadkaada u soo noqo ayaan idin leenahay.”